Ciidamada Uganda Oo Markale Lagu Weeraray Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Uganda Oo Markale Lagu Weeraray Gobalka Shabeelada Hoose.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey markale dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada Kufaarta Afrikaanta gaar ahaan kuwa Uganda ay ka sameysteen deegaan ka tirsan gobalka Shabeelada Hoose.
Dagaalkan waxey ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen saldhiga ciidamada Saliibiyiinta Uganda ee deegaanka Ambareso ee duleedka degmada Baraawe ee gobalka Shabeelada hoose,dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Warar hoose waxey sheegayaan in ciidamada Uganda khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay dagaalkan xalay ka dhacay deegaanka Ambareso ee duleedka degmada Baraawe.
Dagaalkan ayaa kusoo aadaya xilli Labo Habeen ka hor dagaal ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ku qaadeen saldhiga ciidamada Uganda ee degmada Baraawe ay ku dileen Saddex askari Ugandeys ah hal askarine waa laga dhaawacay shisheeyaha Uganda.